Cod-bixiye: Abuur Martidaada-Martida Lagu Wado ee Daruuraha | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 20, 2020 Talaado, Oktoobar 20, 2020 Douglas Karr
Haddii aad waligaa rabto inaad sameysato boodhadh oo aad martida soo gasho, waad ogtahay sida ay u adagtahay. Hadda waxaan u isticmaalaa Zoom si tan aan u sameeyo tan iyo markii ay bixiyaan a xulasho badan marka duubista… hubinta in aan tafatiri karo qof walba raadkiisa si madaxbanaan. Waxay wali u baahan tahay inaan soo dejiyo raadadka codka oo aan ku dhex daro Garageband, in kastoo.
Maanta waxaan la hadlayey nin ay wada shaqeeyaan Paul Chaney wuxuuna ila wadaagay qalab cusub, Soundtrap. Soundtrap waa barxad online ah oo loogu talagalay tafatirka, isku darka, iyo ka wada shaqeynta maqalka - ha ahaato muusig, sheeko sheeko, ama nooc kasta oo duubitaan maqal ah.
Heesta Muusig ee loogu talagalay Sheekooyinka
Dhawaaqa codka waa xal daruur ah oo aad ku duubi karto podcast-kaaga, ku marti qaadi karto martida si fudud, aad wax uga beddeli karto qoraaladaada, oo aad dhammaan u daabici karto adiga oo aan u baahan inaad soo dejiso oo aad dibadda ka shaqeyso.
Muuqaalada Soundtrap Podcast Studio
Barxadku wuxuu leeyahay barxad desktop ah oo bixisa qaar ka mid ah astaamahan dheeraadka ah.
Wax ka beddel qoraalkaaga qoraal ahaan - Barxadda 'Soundtrap desktop desktop' waxay leedahay tifaftire heer sare ah laakiin waxay ku darsadeen qoraal otomaatig ah - muuqaal xariif ah si ay xitaa ugu fududaato wax ka beddelka boodhkaaga sida aad dukumiinti qoraal ah u samayn lahayd.
Martiqaad oo duub martida podcast-ka - Sababtoo ah wadashaqeyntu waxay fure u ahayd markii la qorsheynayay Soundtrap, waxaad si fudud ugu marti qaadi kartaa martidaada fadhi duubasho adigoo u diraya xiriiriye Markay soo galaan, waad ka caawin kartaa dejinta codkooda duubistu way bilaaban kartaa! Uma baahna inay isdiiwaangeliyaan si loo casuumo.
U soo rar maqalka iyo qoraallada Spotify - Kani waa aaladda kaliya ee kuu oggolaaneysa inaad si toos ah ugu soo dhejiso barnaamijka 'podcasts' iyo 'transcript' labadaba barnaamijka 'Spotify', taasoo kor u qaadaysa isku-kalsoonaanta boodhkaaga.
Ku dar muusikada iyo saameynta codka - Abuur jingle kuu gaar ah oo ku dhammaystir wax soo saarkaaga saamaynta dhawaaqa Freesound.org ilaha codka.
Bilow tijaabadaada bilaashka ah ee 1-bilood ee Soundtrap
Tags: wadashaqeynta maqalkatafatirka maqalkatifaftiraha maqalkawax ka beddel codkamartida Podcastpodcasttifaftiraha Podcastboodboodka Podcastqoraalka Podcastsaassaameynaha codkaheesaha codkaSpotifysheeko-sheeko
Alteryx: Isugeynta Nidaamka Falanqaynta Nidaamka (APA)